Apacer ရဲ့ Dual Flash Drive လေးတွေ ~ The ICT.com.mm Blog
Apacer ရဲ့ Dual Flash Drive လေးတွေ
လူကြီးမင်းရဲ့ ဖုန်းမှာ memory မလုံလောက်လို့ စိတ်ညစ်နေပါသလား? ဖုန်းထဲက file တွေ laptops ဆီအလွယ်တကူကူးချင်ပေမယ့် ခက်ခဲနေပြီလား? ဒါတွေ စိတ်ပူစရာမလိုတဲ့ Apacer ရဲ့ Dual Flash Drive လေးတွေ ICT.com.mm မှာဝယ်လို့ရပါပြီနော်..
Apacer ရဲ့ Dual Flash Drive ‌လေးမှာ ရွေးချယ်စရာ ပစ္စည်းသုံးမျိုးရှိပါတယ်။ တစ်ဖက်မှာ USB 3.1 Gen 1 နဲ့ နောက်တစ်ဖက်မှာ Micro USB/ Type-C/ Lightning connect လုပ်ပေးထားတဲ့ Dual Flash Drive လေးတွေဖြစ်ပါတယ်။ New Macbookတွေနဲ့ အခြားသော new-generation Ultrabooks မှာလဲ အသုံးပြုလို့ရပါတယ်။ OTG functions တွေကိုလဲ လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်မှာပါ။
OTG Function တွေကို လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့ ဒီလို Apacer ရဲ့ Flash Drive ကောင်းကောင်းလေးတွေကို ICT.com.mm မှာ ဝယ်ယူနိုင်ပါပြီရှင်။
For Apacer AH190 Lightning Dual Flash Drive 128GB (K56,930),
For Apacer AH180 USB 3.1 Type-C Dual Flash Drive 64GB (K33,350),
For Apacer AH179 USB 3.1 Gen 1 Dual Flash Drive 64GB (K29,900),
Newer Xbox Series X ရေခဲသေတ္တာကို ဖန်တီးလိုက်ပါပြီ
Older Trendwoo brand speaker မျိုးစုံ
WD လို့အတိုကောက်ခေါ်ကြတဲ့ Western Digital အကြောင်း
WD လို့ အတိုကောက်ခေါ်ကြတဲ့ Western Digital ကော်ပိုရေးရှင်းဟာ အမေရိကန်ကွန်ပ...
Storage Devices ထုတ်လုပ်မှုမှာ ရေပန်းစားနေဆဲ Sandisk
SanDisk ဟာ Western Digital ရဲ့ အမေရိကန်အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး memory car...
Storage Device စျေးကွက်မှာ ဆယ့်ကိုးနှစ်ကြာ ရပ်တည်နေတဲ့ ADATA
Storage Device တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ADATA Brand ကိုတော့ အားလုံးလိုလို သိကြမှာ...
Gadgets, News, Review
New product Touch 835
Sp/Silicon Power မှ အသစ်ထွက်ရှိလာတဲ့ Touch 835 flash drive ကိုမိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ Touch 835 ရဲ့ ထူးခြားချက်က 4.5g သာအလေးချိန်ရှိပြီး ...
Power Bank P51,P81,P101
Silicon Power မှ ဆန်းသစ်တဲ့ ပုံစံလေးနဲ့ နောက်ဆုံးထွက်ရှိလာတဲ့ Power Bank P51,P81,P101 Flash Drive လေးနဲ့ မိတ်ဆက်ချင်ပါတယ်။Mobile X20 ရဲ...
Silicon Power New Product
Silicon Power မှအသစ် ထပ်မံ ထွက်ရှိလာသောT06 Memory Flash Drive လေးဖြစ်ပါတယ်။T06 Memory Device ကို Fashion အသုံးအဆောင်တစ်ခုအနေဖြင့် သုံးစ...